वसन्त विषुव २०१x: यो के हो र यो घटना कहिले हुन्छ? नेटवर्क मौसम विज्ञान
छवि - Radiotierraviva.blogspot.com.es
हाम्रो ग्रह सूर्यको सम्बन्धमा कहिले पनि उही स्थानमा रहँदैन: जसरी यसको वरिपरि परिक्रमा हुन्छ र आफैमा घुम्दछ, हामी दिन रात रमाइलो गर्न सक्दछौं, साथै विभिन्न स्थानमा हुने परिवर्तनहरू पनि। महिना बित्दै जाँदा
तर मानव जहिले पनि सबै कुराको नाम राख्नुपर्दछ, सधैं उत्सुक दिन जुन रातमा घण्टा प्रकाश हुन्छ जसलाई विषुव भनिन्छ। वर्षको समयमा निर्भर गर्दछ जुन यो हुन्छ, हामी भन्छौं कि यो शरद equतु विषुव हो वा हो वसन्त विषुव। यस अवसरमा हामी उत्तरार्द्धको बारेमा कुरा गर्ने छौं।
1 विषुव भनेको के हो?
1.1 यो कहिले हुन्छ?
2 और्नल विषुववृत्ति भनेको के हो?
2.1 के यो सँधै समान मितिहरूमा हुन्छ?
3 वर्नेल विषुववृत्तिको समयमा के हुन्छ?
4 मार्च इक्विनोक्सले हामीलाई कसरी असर गर्छ?
विषुव भनेको के हो?
यदि हामीले व्युत्पत्तिविज्ञान लिन्छौं भने, विषुवत शब्द एक शब्द हो जुन ल्याटिनबाट आएको हो जसको अर्थ "बराबर रात" हो। तर जब हामी घटनाको बारेमा कुरा गर्छौं, यो सूर्यको आकार र ग्रहको वायुमंडलीय विशेषताहरूको कारण पूर्ण रूपले सही हुँदैन, जुन विभिन्न अक्षांशमा दिनको लम्बाइमा भिन्नता पैदा गर्दछ। यसैले टर्मको परिभाषा निम्नानुसार छ: वर्षको समय जुन राजा तारा आकाशी भूमध्यरेखाको विमानमा अवस्थित छन्.
यससँग, annualतुको विपरीत वार्षिक परिवर्तन प्रत्येक स्थलीय गोलार्धमा देखा पर्दछ।
यो कहिले हुन्छ?
विषुव २० औं बीचको हुन्छ र मार्च २१ र बीचमा सेप्टेम्बर २२ र २।। उत्तरी गोलार्ध को मामला मा, वसन्त तेस्रो महिना को ती दिनहरु मा शुरू हुन्छ, र सेप्टेम्बर को ती दिन मा शरद; दक्षिणी गोलार्द्धको ठीक उल्टो।
और्नल विषुववृत्ति भनेको के हो?
छवि - विकिमेडिया / नवेलेगान्टे
वसन्त विषुववृत्ति वर्षको एक धेरै प्रत्याशित समय हो। यो क्षण हो जब हामी जाडोलाई पछाडि छोड्छौं र हामी बढी तापक्रमको आनन्द लिन सक्छौं जुन अझ रमाइलो हुनेछ। तर किन यो हुन्छ? यस घटनाको लागि वैज्ञानिक विवरण के हो?
यस प्रश्नको उत्तर दिनको लागि खगोल विज्ञानको केही ज्ञान हुनु आवश्यक छ, र त्यो हो अर्नल विषुव हुन्छ जब सूर्य मेषको पहिलो बिन्दु भएर जान्छजुन आकाशीय भूमध्यरेखाको बिन्दु हो जहाँ राजाले आफ्नो स्पष्ट वार्षिक आन्दोलनमा एक्लिप्टिक-अधिकतम वृत्तको माध्यमबाट तारा star्कन गर्दछ जुन एक वर्षको अवधिमा सूर्यको स्पष्ट मार्गलाई जनाउँछ। भूमध्यरेखा विमानको सम्बन्धमा दक्षिणबाट उत्तरमा.
चीजहरू अलि जटिल हुन सक्दछन्, किनभने मेषको पहिलो बिन्दु, साथै तुला राशिको पहिलो पोइन्ट - त्यो प्वाइन्ट जसको माध्यमबाट तारा सेप्टेम्बर २२-२22 को विषुवमा पार हुन्छ - नक्षत्रहरूमा उनीहरूको नाम भेटिएन। पूर्वग्रहण आन्दोलनको कारण, जुन यो ग्रहको परिक्रमणको अक्षले अनुभव गरेको आन्दोलन हो। विशेष रूपमा, पोइन्ट जुन यस पटक हामीलाई चासो दिन्छ कुंभ राशिको सीमाबाट degrees डिग्री छ.
के यो सँधै समान मितिहरूमा हुन्छ?
हो, अवश्य हो, तर एकै समयमा होइन। वास्तवमा, २०१२ मा यो मार्च २० मा ० 2012:१:20 मा भयो, २०१ in मा यो २० मार्च १ 05:१:14 हुनेछ।
वर्नेल विषुववृत्तिको समयमा के हुन्छ?
छवि - फ्लिकर / डिक थॉमस जॉनसन
हामीले माथि टिप्पणी गरेको बाहेक, त्यस दिन र त्यसपछिका दिनहरूमा धेरै देशहरूले तिनीहरूको वसन्त चाडहरू मनाउँछन्। यो बर्षको एक विशेष विशेष पल हो जुन हरेक बाह्र महिनामा दोहोरिन्छ, र त्यसैले यो आनन्द लिनको लागि एक उत्तम बहाना हुन जान्छ।
यदि तपाईं केहि महत्त्वपूर्ण जान्न चाहानुहुन्छ भने, यहाँ सूची छ।
जापान: जापानी देशमा हनमी मनाउँदछन्, जुन जापानी चेरी रूखहरू वा सकुराको फूलहरूको सुन्दरता अवलोकन गर्न र चिन्तन गर्ने चाडहरू हुन्।
चीन: सेप्टेम्बर सोल्टाइस पछाडि १०104 दिन पछि हुन्छ। त्यस दिन उनीहरू पुर्खाहरूलाई आराधना गर्छन्।
पोल्याण्ड: मार्च २१ को दौडान उनीहरूले परेड गरे जहाँ देवी मर्जानाको स्फिंक्सको अभाव छ, जुन प्रकृतिको मृत्यु र पुनर्जन्मसँग सम्बन्धित संस्कारसँग सम्बन्धित छ।
मेक्सिको: मार्च २१ मा धेरै व्यक्तिले सेतो लुगा लगाउँदछन् विभिन्न पुरातात्विक साइटहरूमा जान आफैलाई पुनजीवन दिन।
उरुग्वे: अक्टोबरमा दोस्रो शनिवारमा घोडाले चित्रित सजावटको कारवाडाहरूको परेड सडकहरूमा घुम्छ।
मार्च इक्विनोक्सले हामीलाई कसरी असर गर्छ?
समाप्त गर्न, म तपाईंलाई बताउन जाँदैछु मार्चमा हुने विषुवले हामीलाई कसरी असर गर्छ, किनकि यसले विभिन्न तरिकाले गर्दछ: हाम्रो प्रिय ग्रहमा, त्यस दिन महत्त्वपूर्ण घटनाहरू घट्छन्, के हो:
उत्तरी ध्रुवमा एक दिन सुरु हुन्छ जुन छ महिनासम्म रहनेछ।
एक रात जो छ महिना लामो हुनेछ दक्षिण ध्रुवमा शुरू हुन्छ।
उत्तरी गोलार्धमा वसन्त शुरु हुन्छ, जसलाई अर्नवल वा वर्नेल विषुव भनिन्छ।
शरद theतु दक्षिणी गोलार्धमा शुरु हुन्छ, जुन शरद orतु वा शरद equतु विषुव हो।
हामी आशा गर्दछौं कि तपाईले वर्नाल विषुव enjoy लाई रमाईलो गर्नुभयो।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Ciencia » वसन्त विषुव
तपाईंले हाइग्रोमिटरहरूको बारेमा जान्नुपर्ने सबै कुरा